Nokia Kushambadzira ... Windows Phone Inotevera | Martech Zone
Nokia Kushambadzira… Windows Phone Inotevera
Muvhuro, October 31, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vaviri Nokia neMicrosoft varasikirwa zvakati wandei mumusika weUnited States, musika unodzorwa ne iPhone neApple. Vanhu havafanirwe kunge vachiverenga chero sangano izvozvi. Chekutanga, Nokia inotonga iyo misika yepasi rose (40%) ine inorema kwazvo chikamu chemusika muEurope neAsia. Nokia haisi kuita zvakanaka chete, vashandisi vayo vane mukana wakanyanya wekubaya pakushambadzira kwakabhadharwa.
Kubva ku Inneractive infographic: Germany inoona 98.9% yekuzadza mwero paNokia, inopfuura 2% CTR uye inodarika $ 2.5 eCPM. Idzo inhamba Apple vanogadzira vanogona kungorota nezve.
Vhiki rino, Nokia yakaburitsa mafoni avo matsva e Windows Phone. Izvi zvingaite senge hombe dhiri kusvikira waisa zvinhu zvishoma pamwechete… Nokia, Windows Phone, uye Microsoft XBox 360. Nhare idzi dzakakwira-dzinofambiswa uye dzakagadzirwa zvakagadzirwa. XBox 360 ine chikamu chikuru chemusika mumhizha yemitambo. Uye Windows ichine anoshamisa musika mugove mu Enterprise. Iyi misika mitatu yakasarudzika uye inobatsira kwazvo.
Sezvo musika webhizimusi unotora Windows Foni uye Nokia inopa zvigadzirwa zvinodiwa… tichaona shanduko dzinonakidza mumusika. Kumwe kubata kwakanaka… mafoni aya anotakura neNokia's auto navigation, mimhanzi sevhisi (nziyo dzinopfuura mamirioni gumi nemana kusvika nhasi), Facebook, Twitter, LinkedIn kusangana pamwe chete SkyDrive… Mushonga wekuchengetedza gore waMicrosoft.